Lalan’ny fampandrosoana ny fanarahan-dalàna | NewsMada
Par Taratra sur 29/06/2019
Zandary 36, miaramila 34… Ireo no nosamborina ary naiditra vonjimaika am-ponja noho ny firaisana tsikombakomba amin’ny dahalo, ny fidirana amin’ny raharaha fakana ankeriny, ny fanaovana kolikoly, ny famoahana sy ny fampanofana fitaovam-piadiana, ny fanaovana herisetra, ny tsy fanajana zon’olombelona… Ahoana koa ny polisy?
Misy manafin-keloka ao matoa tsy hita na odian-tsy hita izany rehetra izany izay ela izay. Na manjaka ny firaisana tsikombakomba, na ny tsimatimanota, na ny fifampiarovana… Ny hazo no tapaka, ny sampany no miandany amin’ny vy. Aiza ho aiza, ohatra, ny eo anivon’ny fitsarana malaza ratsy amin’ny kolikoly amin’izany?
Andrasana ny famoahana sy ny fitsarana ary ny fanasaziana ireo tsy tan-dalàna amin’ny sehatra hafa toy ny fadintseranana, ny fitantanana lafintany, ny fananan-tany, ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany, ny fitantanam-bolam-panjakana… Efa ela sy lalina ary saika nanenika ny sehatra sy ny ambaratonga rehetra ny fahalovana?
Tsy ny lafiny fandriampahalemana ihany tsinona no mampikaikaika ny vahoaka ifotony, na eo tokoa aza izany. Saika mampiferinaina avokoa izay atao sy aleha rehetra talohaloha teo izay. Ny vahoaka ifotony hatrany no tena mitondra faisana noho ny afitsok’ireo hoe tsimatimanota, ireo lehibe tsy meloka, ny ambonin’ny lalàna…
Tsy hisy izay tany sy fanjakana tan-dalàna, raha misy hatrany karazana olom-pirenena hafa noho ny hafa rehetra: mahazo tombondahiny noho ny tsy firaharahana na ny tsy fanarahana lalàna, ny fahalalana olona, ny fampiasana sy ny fanamparana izay mety ho karazan-kery izao na izatsy, ny fandehanana amin’ny lalana ambanin’ny tany…
Vao mainka tsy hisy izay hoe fampandrosoana ny vahoaka ifotony raha mahazo sy omena vahana hatrany ny tsy fanarahan-dalàna. Mba misy amin’izay ve ny fakan-tahaka amin’ny fampiharan-dalàna amin’ity hoe fanovana? Na miainga avy any ambony sy ny lehibe ny ohatra velona alain-tahaka… Hiova ny fanao mahazatra?
“Aza atao hoe ny fombanao no tokony ho lalànao fa ny lalànao no tokony ho fombanao”, hoy ny ohabolana danoa iray izay.